မော်ဒယ်မြင့် ကားတွေ ခုကာလ နောက်ပိုင်း ကားဘော်ဒီတွေ ဘာကြောင့်ပျော့လာရတာလဲ? ဗီဒီယိုလေးနဲ့ သေချာရှင်းပြထားတာပါ…….. – Nyi Ma Lay
မော်ဒယ်မြင့် ကားတွေ ခုကာလ နောက်ပိုင်း ကားဘော်ဒီတွေ ဘာကြောင့်ပျော့လာရတာလဲ? ဗီဒီယိုလေးနဲ့ သေချာရှင်းပြထားတာပါ……..
By Nyi Ma LayPosted on October 27, 2021
ကားသုတေသ နတွေအရ ကားေ ဘာ်ဒီ (body) တွေရဲ့ကြံ့ခို င်မှုတွေကိုလဲ လိုအပ်သ လို ပြုပြင်ပြောင်း လဲလာရပါတယ်။ ရှေးရှေးတုန်း က ကားတွေကို တည်ဆောက် ရာမှာ body မာရင်တို က်ခိုက်မိလဲ အပျက် အစီးနည်းမယ် အထင်နဲ့မာကျောတဲ့ steel တွေနဲ့ တည်ဆော က်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းသုတေ သနတွေလု ပ်တော့ ကား body ပျော့လေလေ (လူစီးတဲ့ cabin ထဲကို ချိုင့်မဝင်မချင်း) impact ကရတဲ့ damage ကလူကိုမ ထိပဲ car body ထဲကို absorb ဖြစ်သွားေ လဆိုတာေ တွ တွေ့လာကြပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် car ရဲ့ main chassis frame ကလွဲလို့ bumper တွေ၊ shell တွေ အကုန်လုံးကို metal အပျော့ (သို့မဟုတ်) plastic တွေနဲ့ အစားထိုး လာကြပါတယ် (Crumple Zone လို့ခေါ်ပါတယ်)။ အမာနဲ့ထားတာ main chassis frame ပဲရှိပါတယ်။
ဒါကိုကားလောကမှာ မသိနားမလည် သူတွေက ဝိတ်လျော့ထားတယ်၊ တိုက်ရင် ပျက်စီးမှု များတယ်ဆိုပြီး နောက်ပိုင်း Brand New ကားတွေ ဝယ်ရင်မေ ကာင်းဘူး လို့ပြောကြပြီး အရင်က ဘော်ဒီမာတဲ့ ကားတွေကို အကောင်းလုပ်၊ အကောင်းပြောပြီး ရောင်းကြပါတယ်။
ဒီတော့ အဲဒီဘော်ဒီ အမာကားတွေစီးလို့ မတော်တဆမှုဖြစ်ရင် လူကိုအများဆုံးထိတယ်ဆိုတာ သိကြဖို့လိုပါတယ်။ပြောချင် တာက ကားစီးရင် seat belt ပတ်ကြပါ။ ဘယ်မြို့မှာေ နနေ၊ ရဲ ရှိရှိ/မရှိရှိ၊ နေ့နေ့ /ညည seat belt ပတ်တာဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အသက်ကို ကာကွယ်ဖို့ပါ။ ရဲအဖမ်း မခံရအောင် မဟုတ်ပါဘူး။
နောက်ပေါ်တဲ့ ကားတွေဆိုတာလည်း အလကား မဟုတ်ပါဘူး။ လှတာ၊ ဆီစားသက်သာတာ၊ ဇိမ်ခံ features တွေပါတာအပြင် Safety features တွေပါ နောက်ဆုံးရ သုတေသန အချက် အလက်တွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ကားအမာစီးလို့တိုက်မိပြီး လူသေရင် အကောင်း အတိုင်းကျန်ခဲ့တဲ့ ကားကို ကိုယ်စီးခွ င့်မရတော့ပါဘူး။ ကားအပျော့စီး၊ seat belt သေချာ ဝတ်ထားရင် တိုက်မိလို့ ကားတစ်စ စီဖြစ်သွားလဲ လူအကောင်းအ တိုင်းကျန်ဖို့ အခွင့်အရေးများပါတယ်။ Safety ရှုထောင့်က မြင်ပေးစေလိုပါတယ်။ Crd : original uploader
ဗီဒီယိုလေးကို အောက်ဆုံးမှာ ထည့်ထားပေးပါတယ်…..ဗဟုသုတများ ပွားများနိုင်ပါစေ
ကားသုေတသ နေတြအရ ကားေ ဘာ္ဒီ (body) ေတြရဲ့ႀကံ့ခို င္မႈေတြကိုလဲ လိုအပ္သ လို ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲလာရပါတယ္။ ေရွးေရွးတုန္း က ကားေတြကို တည္ေဆာက္ ရာမွာ body မာရင္တို က္ခိုက္မိလဲ အပ်က္ အစီးနည္းမယ္ အထင္နဲ႔မာေက်ာတဲ့ steel ေတြနဲ႔ တည္ေဆာ က္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းသုေတ သနေတြလု ပ္ေတာ့ ကား body ေပ်ာ့ေလေလ (လူစီးတဲ့ cabin ထဲကို ခ်ိဳင့္မဝင္မခ်င္း) impact ကရတဲ့ damage ကလူကိုမ ထိပဲ car body ထဲကို absorb ျဖစ္သြားေ လဆိုတာေ တြ ေတြ႕လာၾကပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ car ရဲ့ main chassis frame ကလြဲလို႔ bumper ေတြ၊ shell ေတြ အကုန္လုံးကို metal အေပ်ာ့ (သို႔မဟုတ္) plastic ေတြနဲ႔ အစားထိုး လာၾကပါတယ္ (Crumple Zone လို႔ေခၚပါတယ္)။ အမာနဲ႔ထားတာ main chassis frame ပဲရွိပါတယ္။
ဒါကိုကားေလာကမွာ မသိနားမလည္ သူေတြက ဝိတ္ေလ်ာ့ထားတယ္၊ တိုက္ရင္ ပ်က္စီးမႈ မ်ားတယ္ဆိုၿပီး ေနာက္ပိုင္း Brand New ကားေတြ ဝယ္ရင္ေမ ကာင္းဘူး လို႔ေျပာၾကၿပီး အရင္က ေဘာ္ဒီမာတဲ့ ကားေတြကို အေကာင္းလုပ္၊ အေကာင္းေျပာၿပီး ေရာင္းၾကပါတယ္။
ဒီေတာ့ အဲဒီေဘာ္ဒီ အမာကားေတြစီးလို႔ မေတာ္တဆမႈျဖစ္ရင္ လူကိုအမ်ားဆုံးထိတယ္ဆိုတာ သိၾကဖို႔လိုပါတယ္။ေျပာခ်င္ တာက ကားစီးရင္ seat belt ပတ္ၾကပါ။ ဘယ္ၿမိဳ႕မွာေ နေန၊ ရဲ ရွိရွိ/မရွိရွိ၊ ေန႔ေန႔ /ညည seat belt ပတ္တာဟာ ကိုယ့္ရဲ့ အသက္ကို ကာကြယ္ဖို႔ပါ။ ရဲအဖမ္း မခံရေအာင္ မဟုတ္ပါဘူး။
ေနာက္ေပၚတဲ့ ကားေတြဆိုတာလည္း အလကား မဟုတ္ပါဘူး။ လွတာ၊ ဆီစားသက္သာတာ၊ ဇိမ္ခံ features ေတြပါတာအျပင္ Safety features ေတြပါ ေနာက္ဆုံးရ သုေတသန အခ်က္ အလက္ေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။
ကားအမာစီးလို႔တိုက္မိၿပီး လူေသရင္ အေကာင္း အတိုင္းက်န္ခဲ့တဲ့ ကားကို ကိုယ္စီးခြ င့္မရေတာ့ပါဘူး။ ကားအေပ်ာ့စီး၊ seat belt ေသခ်ာ ဝတ္ထားရင္ တိုက္မိလို႔ ကားတစ္စ စီျဖစ္သြားလဲ လူအေကာင္းအ တိုင္းက်န္ဖို႔ အခြင့္အေရးမ်ားပါတယ္။ Safety ရႈေထာင့္က ျမင္ေပးေစလိုပါတယ္။ Crd : original uploader
Previous post ပူနေတဲ့ အစားအစာတွေ ကို ရေခဲသေတ္တာထဲ ချက်ချင်း ထည့်ရင် ဖြစ်လာနိုင်မယ့် ဆိုးကျိုးများ
Next post သီတင်းကျွတ် ငွေဝင်ကြမ်းတဲ့ ကုသိုလ်ပြု ပုတီးစိတ်နည်း